China wholesale lip stick stick custom logo vegan velvet lip stick stick private label lipstick low moq makeup lip stick stick and suppliers | Ubuhle be-Iris
wholesale lip stick stick custom logo vegan velvet lip stick stick private label lipstick low moq makeup lip stick
Intengo ye-EXW: 0.99 ~ 2.99 USD
Induku yezindebe kumele ube nayo empilweni yakho yansuku zonke, engakhanyisa ithoni yesikhumba sakho. Induku yethu yezindebe ngokukhanya okunye ukuthungwa okumanzi, yethula umphumela owomile wenkungu, yenza izindebe zakho zibe mnandi ngasikhathi sinye, zenze izindebe zakho zikhanye kakhulu futhi zihambe. Ngamunye ukuze afane namathoni wesikhumba ahlukile nezimonyo zibukeka kahle. Thatha eyodwa manje bese udala ubuhle bakho.
* Nikeza ama-shades angama-65 wokukhetha kwakho, hlangana nesicelo sakho semibala ehlukene.
* Faka umbala okhazimulayo ezindebeni zakho, udale ukwakheka okuhlala isikhathi eside futhi wenze izindebe zakho zithandeke ngokwengeziwe.
* Cebisa ngo-vitamin E nomswakama factor, ugcine izindebe zakho zibe umswakama kanye nethenda.
* Ingaphezulu le-Velvet matte, sebenzisa uwoyela womnqumo noma ukhiphe uwoyela wokwenza izimonyo ukususa.
* Usayizi ohlanganisiwe nedizayini engasindi, okulula ukuphatha nokusebenzisa, ihlobisa ubuhle bakho noma kunini noma kuphi.
Igama lento Induku yezindebe
Langaphambilini Ilebhu elizimele elicwebezelayo elebula langokwezifiso linqunu elicwebezelayo lipgloss vegan nesihluku samahhala sezindebe ezinqunu
Olandelayo: I-lipstick yotshwala ne-lip liner isethwe ngokwezifiso i-lip liner ne-lip gloss set lip lip matte ilebula yangasese lipstick lip gloss kit
ngezifiso lip induku
izindebe ezisezingeni eliphakeme ziyanamathela
ilebuli yangasese ye-matte lip stick
ilebula langasese lip stick stick moq ongaphansi
induku ye-velvet lip
i-wholesale lip stick stick ngokwezifiso ze-logo vegan
I-matte lip stick ilebula yangasese yakha induku ...